Manampy an'i Split Croatia amin'ny fandaharam-sidina ny Air Transat
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Manampy an'i Split Croatia amin'ny fandaharam-sidina ny Air Transat
Hambara tsy ho ela ny antsipiriany momba ny programa sidina Air Transat mankany Split, Kroasia, amin'ny fahavaratry ny taona 2019.
Tsy ho ela ny mpitsangatsangana dia afaka manomboka mamandrika sidina mankany Split, Kroasia, vetivety amin'ny alàlan'ny Air Transat.
Nanambara ny zotram-piaramanidina fa hanampy ny Split amin'ny fandaharam-potoanan'ny sidina transatlantic manomboka amin'ny fahavaratry ny taona 2019. Air Transat dia hanolotra sidina mivantana isan-kerinandro mankany Split, izay fantatra amin'ny morontsiraka mahafinaritra eo amin'ny Ranomasina Adriatika.
"Ny fizahantany dia nahita fitomboana nahagaga tao amin'ny Saikinosy Balkan, izay isan'ny toerana ambony indrindra eropeana ankehitriny", hoy ny fanazavan'i Annick Guérard, Lehiben'ny tompon'andraikitra ao amin'ny Transat. "Nahita fahalianana be tany Kroasia izahay hatramin'ny nanombohanay nanidina tany tamin'ny taona 2016. Izany no mahatonga ny Air Transat hirehareha amin'ny fanatrarana tsara kokoa izany fangatahana izany amin'ny alàlan'ny fampiakarana ny tolotra sidina mivantana telo avy any Toronto, ao anatin'izany ny roa mankany Zagreb," hoy izy nanampy. “Ary noho ny sidina mampitohy anay avy any Montreal sy Vancouver, mpandeha maro izao no mahita ny tanàna lehibe indrindra faharoa any Kroasia.”
"Mampientanentana ireo mpandeha kanadiana maniry zavatra vaovao ny Split," hoy ny fanazavan'i Gari Cappelli, minisitry ny fizahantany any Kroasia “Tsy vitan'ny hoe mirehareha lova manan-karena izy io, miaraka amin'ny UNESCO nanambara ivon-toerana manan-tantara izay nanomboka tamin'ny Fanjakana Romanina, fa ny toerana misy azy no mahatonga azy io ho vavahady tonga lafatra mankamin'ny nosy Adriatika Sea sy Eropa Atsinanana.
Hambara tsy ho ela ny antsipiriany momba ny programa sidina Air Transat ho an'ny fahavaratra 2019.